XOG: Alshabaab oo qorsheynaya inay ka baxaan Magaalo Muhiim .
Warar hoose oo Inaga Soo Gaaray magaalada Baardheere ee gobalka Gedo ayaa sheegaya in ay ka sii huleelayaan degmadaasi Alshabaab saraakiishooda ugu sarreysa.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa u xaqiijiyay Jornalizem.com in Alshabaab ay banneynayaan degmada Baardheere kadib markii ay ka war heleen in ay degmada ku soo jeedaan ciidamada Itoobiya oo loo sharciyeeyay inay kamid yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Ilo og ogaal ah ayaa xaqiijiyay in Alshabaab saraakiishooda ku sugan Baardheere ay ogaadeen in ay ku soo fool leeyihiin millateriga Itoobiya oo hadda jooga qeybo kamid ah gobalka Gedo. 50KM wax aan ka badneyn ayaa lagu soo warramayaa inay hadda u jiraan ciidanka AMISOM magaalada Baardheere.
Xog ay ka heshay Baardheere wakaaladda Warqaad ayaa sheegaysa in degm,ada Baardheere ay isugu soo hareen oo kaliya dhallinyaro oo ay ka baxeen raggii waa weynaa, intaas waxaa dheer taliska Baardheere Jagooyin uu magacaabay si dhallinyarada loogu qanciyo inay degmada sii joogaan una muujiyaan in Xarakada weli ay joogto.
Qof ku nool magaalada Baardheere oo diiday inaan xiganno magaciisa iyo codkiisaba waxa uu u sheegay Warqaad in xaaladdu ay tahay mid cabsi ah oo dadka ay ka baqanayaan in Alshabaab ay dhibaateeyaan maadaama ay bixi rabaan.
Dadka qaar waxa ay ka baqanayaan in la ciidameeyo dhallinayarada deegaanka oo ay Alshabaab u adeegsadaan dagaalka Itoobiya ay ku gaarayso magaalada Baardheere.
Ilo hoose oo xog ogaal ah ayaa sheegay in Alshabaab ay tabar dhigeen iminka isla markaana qorshuhu yahay in markii ciidamada AMISOM ee Itoobiya ay soo dhaqaaqaan carruurta loo sheegay inay soo banneeyaan meesha maadaama Itoobiya ay aad u hubeysan tahay wararkana sheegayaan in ay diyaarado adeegsan doonto dagaalka Baardheere.
Baardheere waa degmo kamid ah degmooyinka gobalka Gedo ee Koonfur Galbeed dalka waana magaalo muhiim ah marka loo eego dhanka istaraatiijiyadda.
Booliiska Kenya ayaa ku qabteen garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta (JKIA) sagaal qof oo ay Soomaali, booliis iyo shaqaale diyaaradeed ku jiraan, kuwaasoo lagu tuhmay inay ku lug leeyihiin kooxaha sameeya baasaboorrada iyo fiisooyinka been-abuurka ah.
Paul Okoth Alala oo ka tirsan shaqaalaha Kenya Airways ayaa loo xiray inuu si ula kac ah diyaaradda u saaray dad sita dukumiintiyo been-abuur ah, sidoo kale Mustafa Maallin oo ah askari ka shaqeeya waaxda baarista JKIA ayaa loo qabtay macluumaadka la xiriira dad looga shakiyay dukumiintiyo been abuur ah.
Sidoo kale waxaa la xiray Peter Ngananga Karanja oo la rumeysan yahay in uu yahay ruuxa saldhigga u ah tununnada la baarayo leh xarun lagu far-sameeyo dukumiintiyada been abuurka ah oo ku taalla Ngara, halkaasoo dambi-baarayaashu ay ka heleen 29 baasboor oo been-abuur ah, 39 tiimbare oo fiisayaal been-abuur ah lagu sameeyo, laabtoobyo, markiinadaha wax lagu daabaco iyo kuwa dukumiintiyo la been abuuray.
Waxaa iyagana la xiray laba Itoobiyaan ah, laba Somali ah iyo laba Bangaal ah, sida uu sheegay madaxa waaxda ka hortagga dmbiyada, Noah Katumo.
Ruux kale oo shaqaale ka ah waaxda socdaalka ayaa sidoo kale la tuhunno la mid ah kuwan laga qabaa, waana la baadi-goobayaa kaddib markii uu ka baxsaday garoonka.
"Ma garanayno inta qof ee ay u suuro-gashay inay maraan garoonka iyagoo isticmalaaya baasaboorro iyo fiisooyin been abuur ah, laakiinse waxaan isku dayaynaa inaan arrinkan ogaanno," ayuu yiri Katumo oo mar kale yiri: "Waxay u muuqataa inay yihiin burcad halis ah."
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo sannadkii hore ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya shaqada ka erisay saraakiil sare oo ka tirsanaa waaxda socdaalka, kuwasoo lagu eedeeyay inay dhoof u fududeeyeen dad watay baasaboorro been abuur ah.
Qaraxyo saaka lagu burburiyay baallayaasha Qorraxada ku shaqeeya
Baalayaal ka mid ah kuwa qorraxda ku shaqeeya ayaa lagu qarxiyay xaafadda Al-baraka ee degmada Hodan, iyadoo ay ka dhasheen qaraxyadaas dhaawacyo gaaray dad dhimirka la’ oo la daweynayay.
Qaraxyadan oo loo adeegsaday miinooyin ayaa lagu burburiyay laba baalle, iyadoo dadka dhaawacyadu ay soo gaareen oo ka badan shan qof la sheegay inay ku jireen xarun dadka dhimirka la’ lagu daweeyo oo ku dhaweyd mid ka mid ah baallayaasha la qarxiyay.
“Waxaa dhacay qaraxyo waaweyn oo lagu burburiyay laba ka mid ah baallayaasha ku shaqeeya cad-ceedda, waxaana qaraxyadaas mid ka mid ah uu sababay dhaawaca dad waalan, kuwaasoo xaaladoodu ay aad u daran tahay,” ayuu yiri ruux daggan xaafadda Al-Bakaraka ee degmada Hodan.
Dhaawacyada dadkii waxyeelladu gaartay ayaa saakay loo qaaday goobaha caafimaadka si loo daweeyo, iyadoo tani ay noqonayso markii ugu horreysay oo baallayaal la qarxiyay ay ka dhashaan dhaawacyo noocan oo kale ah.
Ma jirto cid sheegatay inay ka dambeyso qaraxyada lagu burburiyay labadan baalle ee ay ku xiran yihiin nalalka ku shaqeeya cad-ceedda, waxaase horay loogu eedeeyay inay ka dambeyso Al-shabaab.
Jidka soddonka oo ah halka ay ka dhaceen qaraxyadan ayaa ka mid ah jidad sannadkii hore uu maamulka gobolka Banaadir ka hirgeliyay baallayaasha ku shaqeeya cad-ceedda ee habeenkii ifa, iyadoo baallayaasha waddadaas ku yaalla dhowr jeer oo hore la qarxiyay.
Maamulka degmada Hodan iyo kan gobolka Banaadir ayaan weli ka hadlin qaraxyada lala beegsaday baallayaasha ku shaqeeya cad-ceedda ee ku yaallay xaafadda Al-baraka ee degmada Hodan.
Guddigan ayaa sidoo kale wrbixintooda ku sheegay in inkastoo ay Al-qaacida awooddeeda ku ballaarisay dalal Afrika iyo Bariga dhexe ku yaala haddana ay muuqanayso inay Soomaaliya iyo Yemen si weyn ugu jabeen.
“Xarakada Al-shabaab oo ku xiran Al-qaacida ayaa lagu jabiyay magaalooyin ka tirsan Soomaaliya, kuwaasoo laga qabsaday, waana guulaha waaweyn ee laga gaaray dagaallada lagula jiro Al-qaacida,” ayay guddigan u sheegeen golaha.
Agaasimaha hay’adda ammaanka Qaranka Maraykanka, James Clapper ayaa guddi hoosaadka arrimaha sirdoonka u qaabilsan ayaa xildhibaannada dalka Maraykanka u sheegay in inkasoo aysan dowladdiisu walaac ka qabin weerar kaga yimaada Al-qaacida haddana aan la dhayalsan karin halistooda.
Sidoo kale, haweeneyda la yiraahdo Diyan Vanistan oo madax u ah guddi-hoosaadka arrimaha sirdoonka ee golaha baarlamaanka Mareykanka ayaa sheegtay in xogta ay hayaan ay sheegayso in dalka Soomaaliya uu ka mid yahay dalalka awoodda Al-qaacida iyo Al-shabaab lagu wiiqay halka ay ku xoogeysteen dalalka Mali, Libya iyo Masar.
Madaxweynaha Maraykanka, Barack H. Obama ayaa khudabadiisii sanadlaha ahayd oo uu maalmo ka hor jeediyay ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka mid tahay dowlado Maraykanku ku gacansiinaya la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagaxisada.
Hadalkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa xilli toddobaadkan ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ku toogteen duleedka Baraawe oo ay ka taliso Al-shabaab hoggaamiye sare oo lagu magacaabi jiray Isku-dhuuq.
Wariyeyaal fara badan oo Maanta lagu xirxiray Magaalada Buuhoodle
Qaar ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgala magaalada Buuhoodle ayaa maanta xabsiga loo taxaabay kaddib markii ay golaha deegaanka ku eedeeyeen inay xad-gudub ku sameeyeen saxaafadda deegaankaas ka hawlgasha.
Xariggan ayaa yimid kaddib markii maalinimadii shalay ay warsaxaafadeed ay ku cambaaraynayaan golaha deegaanka degmada Buuhoodle ku qabteen xarunta idaacadda Daljir.
Suxufiyiinta ayaa kulankaas kasoo saaray qodobbo ay ka mid ahaayeen:
1. Golaha deegaanku wuxuu si cad ugu xad-gudbay shuruucda saxaafadda iyo midda qiimeynta.
2. Warbaahinta gobolka Cayn waxay yaqiinsadeen in qiimayntaasi ahayd mid lagu furfurayo laguna kala qaybinayo saxaafadda deegaanka.
3. Qiimaynta golaha deegaanku waxay si cad u baalmareen madax-baannaanida iyo xoriyadda saxaafadda.
4. Golaha deegaanku malaha awood ay qiimayn ku sameeyaan mana jiro sharci u ogolaanaya qiimeyn saxaafadeed.
Suxufiyiinta la xiray ayaa sida mas’uuliyiin Buuhoodle ku sugani sheegeen inay ka mid yihiin agaasimha idaacadda Daljir, Khadar Cawl Ismaaciil, sidoo kalena wakiil u ah Royal TV, Cali Cismaan Yuusuf (Cali Dhag-jar) wakiilka Somali Channel TV ee Buuhoodle, Axmed Maxamed Nadiif Radio Daljir iyo Kalsan TV Buuhoodle iyo laba wariye oo kale.
Golaha deegaanka Buuhoodle ayaa dhowaantan soo saaray warbixin ay ku sheegeen inay ku qiimeeyeen saxaafadda ka hawlgasha Buuhoodle, waxayna u kala saareen A, B, C iyo D taasoo keentay kacdoon kaga yimaada dhinaca saxaafadda.
Ma cadda sida ay tani ku dhamaanayso waxaase cad in wadahadal lagu soo af-jari doono arrintan uu socdo maadaama ay tahay markii u horreysay ee suxufi xoriyadda lagaga qaado magaalada Buuhoodle, waxaa kaloo qasbaya saldhig iyo jeel toona malaha Buuhoodle aan ka ahayn kuwa la dhismo ku socdo booliskuna waxay si KMG ah u deggen yihiin guri aanay iska difaaci karin kacdoon sii socda oo dhalin kara gacan ka hadal.
Safiirka Turkiga oo ka hadlay dhismaha isbitaalka Digfeer (SAWIRRO)
Danjire Turan ayaa sheegay in isbitaalka la qalabeeyay ayna sugayaan oo keliya dhakhaatiir Turki ah oo dhawaan soo gaaraya Muqdisho si ay howsha isbitaalka wax uga billaabaan.
“Waxaan ku bixinnahay dhismaha isbitaalka lacag dhan 35-milyan oo doollar dhismihiisa & qalabeyntiisana waan dhameystirnay, waxaana sugaynaa dhakhaatiir ka imaanaya Turkiga kuwaasoo la shaqeyn doona dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha Soomaalida ah ee ka howl-geli doona isbitaalka. Howsha isbitaalku waxay si rasmi ah u billaabanaysaa bisha Feberayo ee soo socota,” ayuu yiri danjiraha.
Sidoo kale, danjiraha wuxuu sheegay in bukaannada imaanaya isbitaalka laga qaadi doono lacago aan badnayn, inta badan lacagaha lagu wadayo howlaha isbitaalka ay bixin doonaan dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya.
“Kharashaadka la siinayo dhakhaatiirta iyo dadka kale ee isbitaalka ka howlgeli doona waxay noqon doonaan kuwo joogto ah,” ayuu hadalkiisa ku daray danjiraha Turkiga u jooga Soomaaliya.
Isbitaalka Digfeer ayaan wax dayactir ah helin 22-kii sano ee colaaduhu ay ka jireen dalka Soomaaliya, iyadoo dib u dhiska isbitaalka uu noqonayo kii ugu horreeyay oo lagu sameeyo tan iyo markii la dhisay.
Muuqaalka isbitaalka Digfeer ayaa waxaa hadda ka muuqda bilic aad u heer sarreysa, iyadoo sidoo kale la dhex-dhisay masaajid weyn oo u dhisan sida ay u dhisan yihiin masaajidda ku yaalla dalka Turkiga.
Ugu dambeyn, safiirku wuxuu sheegay in howsha dib u dhiska isbitaalka ay ka mid tahay mashaariicda ay dowladda Turkigu ka fulinayso Soomaaliya sannadaha soo socda, iyadoo isbitaalka ay maamuli doonaan hay’ado Turki ah shanta sano ee soo socota.
UNHCR oo ka Digtay in Qoxootiga Soomaalida ah Khasab lagu Celiyo
Colaadaha iyo tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca Soomaaliya ayaa 42,000 oo Somali ah ku qasbay inay nabadgalyo ka raadsadaan dariska ah iyo dalal kale intii lagu jiray sannadkii hore ee 2013-ka, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay’adda qoxootiga adduunka ee UNHCR.
Hay’adda ayaa sheegtay in qaxootiga Soomaalida ah ay weli u baahan yihiin ilaalo, iyadoo ugu baaqday dhammaan dalalka marti-geliya dadka magan-galyo doonka ah inayan si khasab ah ku celin Soomaalida.
"Waxaan ka codsanaynaa dalalka qoxootiga martigeliya inay mas’uuliyaadka caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha, waana inaysan si khasab ah ku celin Soomaalida dalalkooda weydiista magangalyada," ayay Fatoumata Lejeune-Kaba oo ah afhayeenka UNHCR ku sheegtay warbixinta.
Sidoo kale, afhayeenaddu waxay hadalkeeda ku dartay: "Soomaalida waa in aan si khasab ah loogu celin Soomaaliya illaa iyo inta dalka wax celinayo uu ku qanco in dadkaas ayan mudan doonin wax dhibaateyn ah."
UNHCR waxay sheegtay in Koonfurta iyo Bartamaha Somalia ay weli yihiin meelo ay khatari ka jirto, iyadoo dilalka billaha ah ee ka dhaca goobahaas ay u dhexeeyaan 100 illaa iyo 600 oo qof. Kismaayo ayay sheegtay hay’addu in lagu dilay 314 qof bishii Juun ee sannadkii hore kaddib markii ay ka dhaceen dagaallo daba-dheeraaday.
"Inagoo tixgelinaynaa inay xaddidan yihiin fursadaha horyaal Soomaalida ku nool Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee ay uga badbaadi karaan in loo geysto dhibaatooyin bar-tilmaameedsan ama hagardaamo kaloo wayn ayaan u soo saarnay warbixintan," ayay tiri Fatoumata.
Ugu dambeyn, warbixinta UNHCR waxaa lagu sheegay inay diiwaan-galisay in 33,000 oo Soomaali ah ay si iskood ah ugu labteeen dalkooda Soomaaliya intii u dhexeeysay bilihii Jannaayo iyo November sannadkii 2013-kii, taasoo ay ka digtay suura-galnimada inayan sii waarin.
MARYAN QAASIM: Caruurta Soomaaliyeed cafis ayaan ka dalbanayaa
Wasiiradii hore ee wasaaradda horuarminta adeegga bulshada xukuumaddii hore, Maryan Qaasim Axmed ayaa ka dalbatay cafis caruurta Soomaaliyeed maadaama ay sheegtay inay fulin karin ballan-qaadkii ay caruurta horay uga qaadday, taasoo ahayd inay hal milyan oo caruur Soomaaliyeed ah u dirayso iskuullada.
Maryan Qaasim ayaa sheegtay in dadaal fara badan ku bixiyeen iyada iyo xubnihii howsha la waday sidii ay ku hirgelin lahayd qorshahaas; balse ay dhacday dowladdii ay ka tirsanayd oo aysan filayn inay dhacayso.
“Carruurta Soomaaliyeed waxaan weydiisanayaa inay i cafiyaan maadaama aan fulin karin ballantii aan horay uga qaaday oo ahaa inaan iskuulka u dirayno hal milyan oo carruur ah saddexda sano ee soo socota,” ayay Maryan Qaasim ka sheegtay xaflad ay ku wareejisay xilalka dhowr wasaaradooda ah oo ay isku haysay.
Wasiiraddan hore ayaa iyadoo ilmeynaysa sheegtay in waxyaabaha sababta u ah ilmadeeda ay tahay in riyadeedii ahayd inay aragto hal milyan oo ilmo Soomaliyeed ah oo waxbarasho lacag la'aan ah haysta si mustaqbalkoodu u wanaagsanaado ay ku hungowday.
“Illaahay waxba kama qarsoona, innagu dadaal badan ayaan u galnay sidii aan uga shaqeyn lahayn in hal milyan oo carruur Soomaaliyeed ah aan u dirno iskuullada saddexda sano ee soo socota, caqabadihii ugu waaweynaa waan kas gudubnay, nasiibdarro xukuumaddii ayaa dhacday, markii aan howshan billaabaynayna waxaan is lahayn afar sano ayaad haysataan,” ayay Maryan Qaasim hadalkeeda ku dartay.
Sidoo kale, wasiiraddu waxay sheegtay in haddii ay ogaan lahayd in xukuumadda ay tahay mid dhacaysa aysan carruurta Soomaaliyeed u sameyn lahayn ballanqaadka ay cafiskiisa ka dalbanayso caruurta Soomaaliyeed, iyadoo mas’uuliyiinta howsha kaga dambeeya ka dal-batay inay mashruuca aada dugsiyada halkiisa kasii wadaan.
“Macallimiinta mashruucan loo tababaray mushaaradkoodii qaarkood waa la siiyay, balse waxaa maqan tii ay dowladda ka sugayeen, waxaana filayaa in la bixin doono sida uu madaxweynuhuba ballanqaaday,” ayay mar kale tiri Maryan Qaasim.
Wasaaradda horumarinta adeegga bulshada ayaa waxay ka kooban dhowr wasaaradood oo ay ku jirtay wasaaraddii waxbarashada, kuwaasoo hadda la kala qaaday lagana dhigay dhowr wasaaradood oo siman.
Ciidamadii Uganda iyo Burundi oo Isaga Baxay Magalaada Baydhabo
Magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa waxaa ka baxay ciidammo ka tirsan AMISOM oo isugu jiray Burundi iyo Uganda, kuwaasoo muddo sannado ah howlgallo nabad ilaalin ah u joogay gobolka Bay.
Ciidamadan ayaa ka guuray dhammaan saldhigyadii ay kaga sugnaayeen Baydhabo iyo deegaannada, iyadoo markii ay guurayeen uu kaare ay wateen burburiyay taalladii afar irdoodka, kaddib markii kaaraha oo xawaare sare ku socday uu si lama filaan ah ugu yimid taallada oo ay Baydhabo caan ku ahayd.
Sidoo kale, khasaaraha ay dhaliyeen ciidamada AMISOM ayaa waxaa ka mid ah in gaari ay wateen AMISOM uu lug ka jiiray haweeney waayeel ah oo lagu magacaabo Faadumo Cabdow taasoo lagu daweynayo isbitaalka weyn ee Baydhabo.
Baydhabo ayaa waxaa dhinaca kale lagu dhaariyay golaha dhaqanka ee lixda gobol oo gaaraya 54 xubnood, iyadoo 19-xubnood aysan soo xaadirin goobta dhaarinta, waayo tirada guud waa 73 nabaddoon.
Odayaasha ayaa soo magacaabi doonaa guddiga doorashada ee soo diyaarin doona shuruudaha laga doonayo madaxweynaha maamulka Koonfur-galbeed iyo labadiisa ku xigeen. Laakiin madaxweynaha iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa soo dooran doona golaha dhaqan ee lixda gobol ee 73 xubnood ka kooban.
Ganacsato Somali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika
Kooxo madow oo Koonfur Afrikaan ah ayaa dil iyo dhaawac ugu geystay dalkaas ganacsato Soomaaliyeed, iyagoo dilay mid ka mid ah saddex ganacsato ah oo isla socday, halka laba kalena ay dhaawaceen.
Ibaahim Aadan Xuseen oo ay ehello ahaayeen ganacsadaha la dilay ayaa u sheegay VOA-da in ganacsadaha la dilay lagu magcaabi jiray C/qaadir ayna toogteen kooxo madow oo Koonfur Afrikaan ah.
“C/qaadir iyo labada ganacsade ee la dhaawacay watay wateen gaari yar oo ay ugu soo adeegteen dukaanno ay lahaayeen, markii ay adeeggii dajiyeen waxaa waxaa goobta yimid kooxo hubeysan oo madow ah, waxayna rasaas ku fureen C/qaadir, waxayna dileen isagoo qaylinaya oo leh yaan la i dilin,” ayuu yiri Ibraahim.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in labada ganacsade oo kale iyagana la toogtay balse ay dhaawacmeen, wuxuuna xusay in mid ka mid ah dhaawiciisa uu aad u daran yahay, halka mid kalena uu dhaawac fudud gaaray.
“Booliis ayaa meesha yimid - ma jirto cid ay qabteen, waxaana doonaynaa in marka aan aasno maydka maanta inaan daba-gal ku sameynno kooxihii dilka geystay,” ayuu yiri ruuxan ay ehellada ahaayeen marxuumka la dilay.
Mar la weydiiyay su’aal ahayd in dadka dilalka geysta la marsiiyo sharciga iyo in kale ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin cid lasoo qabto, dhowrka casho ee u horreysa oo keliyana loo murugoodo qofka dhintay kaddibna qof walba uu howshiisa iska raacdo.
Dilka marxuumkan Soomaaliga ah ayaa iyo dhaawaca labada kale ayaa ka dhacya tuulo ay dukaamo ku lahaayeen, waxaana tani ay qayb ka tahay dilal dhowr ah oo Soomaalida ganacsatada ah loogu geystay dalkaas.
War Culus: R/Wasaare Cabdi weli Sheekh oo sir culus fashiliyay, Arrinta ka taagan Sh/hoose “DHAGAYSO
a’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa sheegay in arrinta ka taagan gobalka Shabeellaha Hoose ay noqotay mid ku taagan dowladda Soomaaliya.
“Aniga iyo madaxweynaha iyo wasiirka ,,,,
Madaxweynaha: Howlgallada AMISOM dhawaan ayay billaabanayaan
Xasan Sheekh oo ka qaybgalay shirka madaxda Afrika ee Addis Ababa ka socda ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay horay ugu socon doonaan goobaha ay ka taliso Al-shabaab.
“Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa howlgalkaas si wadajir ah u fudlin doona howlgalka lagu ciribtirayo Al-shabaab, waxaana qorshuhu yahay in laga saaro gabi ahaan deegaannada ay kaga sugan yihiin Somalia,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale, madaxweynaha oo aan si cad u sheegin xilliga ay howgalladani billaaban doonaan ayaa haddana wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku billaaban doonaan.
“Dhab ahaan qorshaheennu waa inaan joojinno dhibaatooyinka ay dalka ka geysanayaan, balse way dhici kartaa in muddo ay sii jirto kooxdan,” ayuu ku daray hadalkiisa.
Toddobaadkii hore ayay ciidamada Itoobiya ku biireen howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, iyadoo la sheegay inay ka howlgeli doonaan saddex gobol oo ku yaalla Koonfurta Soomaaliya, iyadoo tirada AMISOM lagu wado inay gaarto 22,000 oo askari.
“Hadda ciidanka Itoobiya waxay ku joogaan mid la mid ah qorshe howleedka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, mana ahan ciidammo si iskood ah u jooga Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Dhanka kale, ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nick Kay ayaa ka sheegay Addis Ababa in AMISOM ay u baahan tahay taageero milaterig oo caalami ah si ay howlgalka u billowdo.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqso badan ay u hirgelin doonaan deegaannada Al-shabaab laga saaro maamullo hoos imaanaya dowladda Soomaaliya , sidoo kalena ay ka hirgelin doonaan waxyaabaha ay shacabku u baahan u yihiin.
Shiikh Xasan Daahir Aweys oo Xabsigiisii loo bedelay mid Xabsi guri ah
Hoggaamiyahan ayaa kasoo baxsaday Al-shabaab sannadkii hore ee 2013-ka, kaddib markii uu khilaaf soo dhexgalay xubno uu isagu ka mid yahay iyo hoggaamiyaha Al-shabaab, taas oo keentay in xilli habeen ah uu kasoo baxsado degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Saraakiisha hay’adda nabadsugidda Qaranka ayaa xaqiijiyay in Sheekha laga saaray xabsi ku dhex-yaalla ha’yadda nabadsugidda oo uu muddo toddoba bilood ah ku xirnaa, iyadoo loo wareejiyay xabsi guri.
Guriga lagu haynayo Sh. Xasan Daahir ayaan la sheegin halka uu rasmi ahaan ku yaallo, iyadoo tani ay ku timid wadahadallo dhawaanahan u socday odayaal ay isku hayb yihiin Sheekh Xasan Daahir iyo mas’uuliyiin ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Afhayeenkii hore ee ururka Xisbul Islaam, Maxamed Cismaan Caruus oo ka hadlay xarigga Sheekh Xasan iyo isbedelka lagu sameeyay ayaa sheegay in weli uu Sheekhu u xiran yahay dowladda Soomaaliya oo laga soo wareejiyay xabsigii uu ku xirnaa laguna hayo xabsi guri.
“Tani weli waa mid muujinaysa in Sheekh Xasan Daahir uu u xiran yahay dowladda Soomaaliya, arrinkiisuna waa xabsiga laga saaray iyo xabsi guri la geliyay, taasoo aan waxba is-doorin,” ayuu yiri Caruus oo ka mid ahaa xubnihii la socday Sheekh Xasan Daahir markii la xirayay, balse intii lagu jiray garoonka dhuuntay.
Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa weli ka hadlin isbedelka xabsiga lagu sameeyay xariga Sheekh Xasan Daahir, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo laga bedelo xabsiga Sheekh Xasan Daahir tan iyo markii lagu xiray Muqdisho.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxmauud ayaa horay u sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu yahay nin madax-adag haddii uu qirto inuu ka baxay ka mid ahaanshaha Al-shabaab ay dhici karto inuu isbdelo xaalkiisa.
Madaxda dowladaha ku midaysan ururka Midowga Afrika ayaa maalmihii ugu dambeeyay kusoo qulqulayay magaalada Addis Ababa oo uu ka furmay maanta shirkii 22-aad ee ay isku arkayaan hogamiyayaasha qaaradda Afrika.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa kamid ah madaxda soo gaaray Addis Ababa si uu shirkaas uga qayb-galo, waxaana sii diiran loogu soo dhaweeyay Bole internatinal Airport oo madaxda oo dhan ay ka soo dagayeen.
Waxaa lagu wadaa in shirka looga hadlo arimo ay kamid yihiin colaadaha ka soo cusboonaaday wadamada kala ah Koonfurta Suudaan iyo jamhuuriyadda Afirkada dhexe oo bilihii ugu danbeeyay ay ka socdeen dagaallo dad badani ay ku dhinteen.
"Si gaar ah waxaa diiradda loo saari doonaa qorshaha lagu hormarinayo qaaradda Afrika, iyadoo sanadka 2036-da laga filayo Afrika in ay joogto meel ka wacan meesha ay hadda joogto," ayaa lagu yiri war kasoo baxay ururka Midowga Afrika oo hordhac u ahaa kulanka maanta.
Sida uu xusay madaxweynaha Soomaaliya markii uu soo gaaray Ethiopia, waxaa iyadana qorshaha ku jirta in Midowga Afrika ay ka doodaan sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa la dagaallanka kooxaha argagaxisda ah.
Maalinimadi shalay ahayd waxaa la soo gaba-gabeeyay shirkii wasiiro arimo dibadeedyada wadamada xubnaha ka ah Midowga Afrika, waxaana Somalia uga qayb-galay wasiirka arimaha dibadda Cabduraxman Ducaale Baylax.
Ugu danbayn, waxaa lagu wadaa marka la soo gaba-gabeeyo shirkan in laga soo saaro qodobo muhiim ah oo la xiriira waxyaabaha la qabanayo sanadaha soo socda ,iyadoo la dhiiri galin doono amniga iyo dhaqaalah Afrika oo horurmay ballaaran sameeyay.
Xarakada Al-Shabaab oo ka talisa deegaanno badan oo ku yaalla Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka geysato deegaannada ay ka taliso xadgudubyo ay ka mid yihiin inay si khasab ah ku askareeyso dadka waaweeyn iyo carruurta ayna shacabka ka xadidday xuquuqdii asaasiga ahayd ee ay lahaayeen.
"Al-Shabaab waxa ay fulisay dilal bar-tilmaameedsan, gowracyo iyo dal-dalaad, gaar ahaan kuwa loo geeystay shakhsiyaad lagu eedeeyay inay ahaayeen jaajuusiin," ayaa lagu sheegay warbixinta.
Warbixinta ayaa si gaar ah loogu xusay dhowr weerar oo waaweeyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya, sida mid ismiidaamin ah oo xoogagga Al-shabaab ay ka fuliyeen bishii Abriil ee sannadkii hore xarunta maxkamadaha, kaasoo ay ku dhinteen 29 qof oo rayid ah.
Sidoo kale, waxaa lagu soo qaaday weerarkii ismiidaamis ahaa ee ka dhacay xarunta Qaramada Midoobay bishii Juune ee isla sannadkii hore kaasoo ay ku naf-waayeen 14-qof oo ay ku jireen shaqaale ajaanib ah. Waxaana si cad u sheegtay weerarradan Al-shabaab.
"Kuwaa dagaalka kula jira al-shabaab sida ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM, ciidamada Itoobiya iyo malleeyshiyaadka xulufada la ah ayaa iyaguna geystay tacadiyo ka dhan ah bani’aadamnimada,“ ayaa warbixinta lagu sheegay.
Warbixinta ayaa tusaale u soo qaadatay bishii Feberaayo ee sannadkii hore markii xukuumadda Soomaaliya ay xirtay gabar la sheegay in la kufsaday iyo saxafigii waraystay. Garsoorka ayaa labadaa qof ku helay dambi ah inay ceebeeyeen sumcadda hay'adaha dawliga ah, laakiin mar dambe ayaa laga qaaday xukun la dul-saaray kaddib markii ay dacwaddu dhalleeceynno adag ay kala kulantay caalamka intiisa kale.
Ugu dambeyn, warbixinta waxaa lagu sheegay in Somalia ay wali baaqi ku tahay meelaha ugu halista badan caalamka ee ay saxafiyiintu ka howl-galaan, iyadoo wax ka qabasho la'aanta dilalka suxufiyiinta loo geysto ay ay wali sii jirto.
Dableyda dilka iyo dhaawaca geystay ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen bar koontarool, iyagoo rasaas ku furay gaadiidka markii ay koontaroolkaas kusoo dhawaadeen, taasoo keentay inay laba ka mid ah ganacsatadii watay qudaarka ay dhintaan.
“Rasaas ayaa gaadiidka lagu furay, aniga iyo dad badan oo darawalladii iyo caawiyeyaashii gaadiidka ay ku jiraan waan cararnay, fajaciso ayayna nagu noqotay rasaasta,” ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatadii qudaarta ee xalay lagu weeraray duleedka degmada Afgooye oo saakay warbaahinta ugu warramayay Afgooye.
Sidoo kale, ganacsadaha ayaa sheegay inay xalay oo dhan ka maqnaayeen gaadiidkooda ayna saakay u yimaadeen, kaddib markii kooxihii rasaaseeyay ay ogaadeen inay goobta isaga tageen.
“Maydadka labada qof waxay xalay oo dhan dhex-yaalleen mid ka mid ah gaadiidka, qofka dhaawaca qabayna xalay oo dhan wuu dhiig-baxayay, saakay ayaana isbitaal u soo qaadnay,” ayuu yiri goobjooguhu hadalkiisa ku daray.
Wararka ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid ah caawiyeyaashii mid ka mid ah gaadiidkii xalay la rasaaseeyay la la’yahay raq iyo ruux meel uu jiro, waxaana falkan uu imaanayaa xilli gaadiidleyda gobolka Shabeellada Hoose ay ka cabanayeen isbaarooyin fara badan oo gobolkaas lasoo dhigtay.
Ma jiro cid ka tirsan maamulka gobolka oo ka hadlay dhibaatada xalay loo geystay ganacatada qudaarta ee isaga gooshayay degmada Afgooye iyo deegaannada ku dhow-dhow ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Mudane Tarsan ayaa hadalkan ka sheegay xaflad uu xilka kula wareegayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, C/llaahi Goodax Barre oo shalay ka dhacday Muqdisho.
“Wasiirrada cusub ee xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan dagaan; taasoo qayb ka qaadan karta xoojinta ammaanka caasimaadda,” ayuu yiri Tarsan oo sheegay in wasiirradu ay ka baxaan sarta weyn ee ay ku jiraan.
Sidoo kale, duqa Muqdisho wuxuu xusay in shacabka Muqdisho ku nool ay aamineen in goobahay mas’uuliyiinta dowladdu deggen yihiin ay yihiin amni iyagoo ka baqaya inay meelaha kale tagaan, haddiise ay wasiirradu dagaan waxay noqonaysaa in ra’yigaas uu isbedelo.
“Maamulka gobolka Banaadir wuxuu billadda sannadka siinayaa wasiirkii ugu horreeya oo dega degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana hubaa in amniga wasiirkaas la sugi doono,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Tarsan wuxuu hadalkiisa ku daray in goobaha ay dowladdu daggan tahay uu sicir-barar xooggan ka jiro marka loo eego kireynta guryaha, hoteellada iyo cunnooyinka, wuxuuna sheegay inay taasi is-bedeli doonto haddii wasiirradu ay isku ballaariyaan Muqdisho oo dhan.
Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ka dalbaday in federaaleynta laga billaabo Muqdisho, lana qeexo maqaamka ay yeelanayso, inta aan loo gudbin gobollada dalka.
“Haddii maamullada gobollada dalka lasoo dhiso, waxay noqonaysaa in la isugu yimaado Muqdisho oo lagu murmo sidii loo qaybsan lahaa, innaguna taas ma doonayno, balse waxaan doonaynaa in Muqdisho la caddeeyo inay noqonayso caasimadda federaalka iyo inay gobollada maamullada loo sameynayo ka mid noqonayso,” ayuu yiri Tarsan.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka dalbaday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka inuu awoodda saaro sidii loo qeexi lahaa maqaamka ay yeelanayso Muqdisho.
Basaboorka Soomaliya oo Dawlada Somaliya Jojisay Iyo Shacabka oo Kuxaniban Dalalka Carabta iyo Africa Basaboor Laantiis.
Waxaa Jira In Dowlada Soomaliya eey iska badashay sharikadii usameyneysay Basabooraha oo eey kubadashay shariikad kale oo Masaari ah oo Kasoo jeeda Dalka Masar.
Hadaba shariikadii hore ayaa Deen Kuleh Dwlada Soomaliya Dawladana Deenkii weey bixin weyday .
Hada Muda 3 Bilood Basaboor Mayaalo Safaaradaha Soomalida ee Kusugan Dallalka Caalamka.
Hadaba waxaa Lakulanay Xaalado aad aan Uga Xumaanay oo Kamid tahay inaanu aragno Waliba Dalka Imaraatka Carabta Dad Caruurtii Fine ama Qaraamo ama Cashuur Lagu bilaabay oo awoodi la ineey Usameyaan Wax Sharci ah Caruurtaas.Qaarna Danta Ku Kaliftay ineey Dhoofiyaan oo eey ujaraan go home .
Dhanka kale ayaa waxaa aragnay Shaqaale Basaboorkiisi Ka dhacay laakin la wax baasaboor ah kaas oo kuseegay Shaqadiisa uu hayey sababtuna tahay basaboor laantaas.
hadaba waxaa isweydiin leh meeday dowladii soomaliya xageey ka jirtaa arimahaas maxeey wax uga qaban weysay howlahaas Soomalida haysato .
Waanu ognahay dhamaan Madaxda soomalida ah ineey haystaan Baasabooro ajanabi ah Laakin Danbiga Shacabka waamaxay oo Loo Wada Xanibayaa.
SIR CULUS:Akhriso wasiirada Gaas Beelaha Kasoo Jeedaan Iyo Beesha Leylkase dagaal iclamiyey
Beesha Laylkase ayaa Ku baqay inay kasoo Horjeedaan Magacaabida Golaha wasiirada Cusub kadib markii sheegeen In laga Diley nabadoon caana Sidoo kale Xilalkani waxba Ka Wayeen. 1-Ismaaciil Maxamed Warsame Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda iyo arrimaha Diinta (Dhulbahante,Goboladda Sool iyo cayn) 2-Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dowladaha hoose (Dhulbahante,Goboladda Sool iyo cayn) 3-Xasan Cismaan Maxamuud Alloore Wasiirka Wasaaradda Amniga (Ciise Maxamuud,Gobolka Nugaal) 4-Shire Xaaji Faarax Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda(Cali Saleebaan,Goboladda Bari,Karkaar iyo Gardafuu) 5-Sahra Siciid Nuur Wasiirka Wasaaradda Dastuurka, Arrimaha Federaalka iyo Dimuqraadiyadda (Wabeeneye,Goboladda Bari,Karkaar iyo Gardafuu) .6-Cali Axmed Faatax Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah (Warsangali,Goboladda Sanaag iyo Hayland). 7-Cabdullaahi Cali Ducaale Wasiirka Wasaaradda Xannanada xoolaha (Warsangali,Sanaag iyo Hayland). 8-Cali Xaaji Warsame Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada (Cumar Maxamuud,Gobolka Mudug). 9-Dr.Saadiq Eenow Wasiirka Wasaaradda Caaafimaadka (Cismaan Maxamuud,Goboladda Bari,Karkaar iyo Gardafuu). 10-Cabdirashiid Maxamed Xirsi Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud (Leelkase,Gobolka Mudug). 11-Xasan Xaaji Siciid Xasan Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada & Garoomada (Cismaan Maxamuud,Bari,Karkaar iyo Gardafuu). 12-Cabdullaahi Jaamac Saalax Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka (Dishiishe,Gobolada Bari,Karkaar iyo Gardafuu) 13-Anisa Cabdulqaadir Xaaji Muumin Wasiirka Haweenka iyo arrimaha qoyska (Siwaaqroon,Goboladda Bari,Karkaar iyo Gardafuu) 14-Abdinuur Cilmi Maxamuud Biindhe Wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka Badda (Dhulbahante,Goboladda Sool iyo Cayn) 15-Guuleed Saalax Barre Wasiirka Deegaanka,dalxiiska iyo Duurjoogta (Ciise Maxamuud,Gobolka Nugaal). 16-Maxamed Xasan Soocadde Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha (Dhulbahante,Goboladda Sool,Sanaag iyo cayn) 17-Cabdiraxmaan Shiikh Axmed Cabdulle Wasiirka Shaqada,Shaqaalaha Dhalinyarada (Ugaar Saleebaan ,Goboladda Bari,Karkaar iy Gardafuu).
DHEGAYSO:- Liiska Wasiirada Puntland oo lugu dhawaaqay
Waxaa Maadxwaynaha Puntland uu shaaciyay Liiskiisa wasiirada. iyadoona rag badan oo la garanayo ay kasoo dhex Muuqdeen Liiska
La soco goor dhow Liiska oo qoraal ah
RIIX HALKAAN SI AAD U DHEGAYSATO LIISKA GOLAHA WASIIRADA PL
DEG DEG:- Xukuumada Puntland oo lugu dhawaaqay
Waxaa lugu dhawaaqay Liiska Golaha Wasiirada Puntland & dhamaamba Xukuumada waxaana ku dhawaaqay Agaasimaha Madaxtooyada Puntland, kadib Markii Madaxwaynuhu soo gudbiyay.
Cali Xaaji Warsame oo Musharax ahaa ayaa loo magacaabay Wasiitka Waxbarashada Puntland, Shire xaaji Wasiirka Maaliya Puntland aya alaga dhigay halka Cabdrashiid Maxamed Xirsina laga dhigay Wasiirka Hawlaha guud ee Puntland.
la soco goor dhow Liiska Wasiirada Dhegaysi & qoraalba.
Fadeexad Dul-hoganaysa Madaxa Laanta Socdaalka Somaliya Janaral Gaafow Oo Ku Aadan Guri Uu Qoys Kaga Haysto Bililiqo + Video.
Taliyaha laanta socdaalka Somaliya Jeneral Gaafow oo ay dul-hoganayso fadeexad sheegaysa in uu bililiqo ku haysto guri ay leeyihiin qoys Soomaaliyeed oo guri ku lahaa agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Fadeexadan oo muujineysa sida magaalada Muqdisho weli uga fog tahay xarun ay si nabad ah ugu noolaan karaan dhamaan dadkii ku lahaa hantida maguurtada ah ee ka kala yimi gobolada kale dalka Somaliya, isla markaana waxaa wax laga yaxyaxo ah in masuuliyiintii ugu sareysay ee dawlada Xasan Sheekh ay hormuud u noqdaan dhaca hantidii maguurtada ahayd ee shacabka.
Waxaana aaanu halkan hoose idiinku soo gudbineynaa warbixin maqal iyo muuqaal ah oo ay qoyskaas dhibanaha ahi ugu talo galeen warbaahinta ee daawasho haboon:
Degmada Baydhabo oo laga Taagay Calanka Maamul Goboleed cusub
Magaalada Baydhabo ayaa markii ugu horreysay laga taagay calan uu leeyahay maamul goboleedka ay lix gobol ay ku mideysan yihiin, iyadoo magaalada uu ka socdo shir kale oo la doonayo in lagu dhiso maamul goboleed ka kooban sadeex gobol oo keliya.
Xarunta ee ADC oo madaxtooyo KMG ah u ah maamulka Koonfur Galbeed ee la dhisayo ayaa waxaa buux-dhaafiyay dadweyne aad u fara badan, kuwaas oo doonayay inay goobjoog ka noqdaan saarista calanka.
Sidoo kale, waxaa goobta ku sugnaa ergooyin kala duwan, siyaasiin iyo qaar ka mid ah salaaddiinta gobollada uu maamulkan kulminayo, waxaana markii calankan la saaray ay waxaa goobta laga maqlay sawaxan calankaan cusub lagu soo dhaweynayo.
Munaasabadda calan-saarka kama aysan qaybgelin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada booliska ee gobalka Bay. Waxaan kaloo aan iyana ka qaybgelin guddoomiyaha gobalka Bay, Cabdi Aadan Hoosoow oo ka mid ahaa xubnihii shirka taageersanaa, balse wararka qaarkood ay sheegayaan in dowladda u soo dirtay diyaarad ka timid Muqdisho loo kexeeyay, kaasoo ahaa safara lama filaan ah.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in sababta ay ciidamadu ay goobta u tegi waayeen ay tahay amar kasoo baxay dowladda oo loogu diiday inay ka qaybqaataan calan-saarkaas.
Maanta oo Talaado ah ayaa lagu wadaa in la doorto golaha wakiillada ee maamulka Koonfur-galbeed Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin lix gobo loo ku yaalla Koonfurta Soomaaliya.
Xildhiabanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan Baydhabo ayaa sheegay in maamul goboleedkan uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka, sidaa darteedna ay kasoo horjeedaan.
Wasiirada Somaliland oo taageeray qaadashada Kaarka Muwaadinka
Golaha Wasiiradda Somaliland , ayaa ansixiyey qorshe ay muwaadiniinta Somaliland ku qaadanayaan kaadhka Jinsiyadda oo wasaaradda Arrimaha guduhu soo jeedisay in bisha Febraayo ee sanadkan la bilaabayo.
Fadhigan aan caadiga ahayn ee golaha Wasiiraddu yeeshay ayaa waxa hogaaminayey madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan C/laahi Ismaaciil (Saylici) oo ah ku simaha madaxweynaha, waxaanay goluhu aqlabiyad iskugu raaceen inay taageeraan qorshaha qaadashadda kaadhka jinsiyadda ee ay waddo wasaradda Arrimaha gudaha.
“Waxaynu ku falan-qeynaynay shirkii Golaha Wasiirradu yeesheen qaadashada kaadhka jinsiyadda oo wasaaradda Arrimaha guduhu ay afar maalmood ka hor ay iclaamisay inay dalka ka qabsoomayso, arrintaas ayaa lagu ansixiyay shirkan,”ayuu yidhi madaxweyne ku xigeenka C/raxmaan Saylici oo ka hadlayey shirka golaha wasiiradda yeesheen iyo ujeedadiisa.
“Waxa maanta fadhigii aan caadiga ahayn ee Golaha Wasiirrada lagaga hadlayay oo Goluhu dood adag oo qiimo leh ka yeeshay hanaanka ay u dhacayso diiwaan-gelinta iyo qaadashada kaadhka muwaadinimada (Jinsiyadda). Dood dheer ka dib waxa la isku raacay in diiwaan gelinta qaadashada kaadhka jinsiyadda laga fuliyo dhammaan goboladda dalka oo dhan”ayuu yidhi wasiirul dawlaha madaxtooyadda Maxamed Muuse Abees oo faah-faahin ka bixinayey shirkan golaha wasiiradda.
Wasiirul dawlaha Madaxtooyadda, ayaa sheegay in bixinta kaadhadhkan jinsiyada ay muhiim u tahay qaranimadda iyo muwaadinimadda dadweynaha ku dhaqan Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland, ayaa sheegtay in bishan soo socota ee Febraayo dalka laga hirgalin doono kaadhadhka aqoonsiga muwaadinimo ee loo yaqaan kaadhka jinsiga, kaas oo dadweynaha loogu booriyey inay qaataan